Waa in la ogaadaa in rikoorrada webcam waa kuwa ugu fiican oo gobolka ka mid ah qalabka farshaxanka si loo hubiyo in user helo adeegyada ugu fiican iyo barnaamijka waxaa lagu diiwaangeliyaa oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in tutorial ah in loo qoray arrintan la xiriira waxaa la socda in ay ka buuxaan si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah aqoon functionalities tahay marka ay timaado webcam rikoorrada iyo gaar ahaan Studio Cam ah sida barnaamij caan ah in arrintan la xiriira.
Top 10 Talooyin ku saabsan Cam Studio
Xal More awood duubo Video
Ka dib waa 10 Talooyin in ay tahay in la raaco arrintan la xiriira:
1. naafonimo Audio
Waa mid ka mid ah sifooyinka barnaamijka loo isticmaali karo si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay marka ay timaado qoro shaashadda fudayd iyo qanacsanaanta. Marar badan kaliya Qabsashada shaashadda loo baahan yahay iyada oo aan wax lagu qoro si loo naafo karaa sida tilmaamaha barnaamijka iyo haddii ay adag tahay markaas user ayaa sidoo kale isha la raaci karaan sawirka hoos waa in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay waxaa loo riyaaqay arrintan la xiriira
2. fursadaha Video
User waa in ay hubiyaan in fursadaha video ay yihiin sahamiyey si loo hubiyo in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee horumarinta farshaxanka iyo qaadashada ee video ah in la sameeyo qaab sameeyo. Waxaa sidoo kale la hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo daaha duubo la xiriira waxaa loo sameeyaa hab ugu fiican. Haddii video waxa ay ku diiwaan hab kaamil ah ka dibna waxaa hubaal ammaanay dadka kale iyo user ah ayaa sidoo kale ka heli kartaa lambarka weyn ee views ka YouTube ah.
Duubo 3. Microphone
Qalab ah in la isticmaalo waa in la gundhig la duubo iswada si loo hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka aan ku riyaaqay kaliya laakiin user sidoo kale helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira si ay u hubiyaan in wax soo saarka final u muuqataa wanaagsan iyo ugu fiican.
4. fursadaha Barnaamijka
Fursadaha Barnaamijka waxaa la sahmin waa in la hubiyo in barnaamijka ka shaqeeya sida baahida loo qabo iyo baahida isticmaalaha. Waxa kale oo ay ka dhigi lahaa hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay in qarsoon yihiin gudaha iyo in karaa oo keliya marka la sahmin si loo hubiyo in user helo shaqada ugu wanaagsan ee lagu sameeyey qaab iyo fasalka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in barnaamijka la soo bixi website-ka rasmiga ah si aad u hesho nuqul cusub.
5. faahfaahinta Channel
Wixii duubista user sidoo kale hubin karaa in in channels yihiin cayiman oo ka mid ah ugu wanaagsan ee la doortay si ay u helaan shaqo u samayn oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in ay hubiyaan in fursadaha barnaamijka waxaa loo isticmaalaa in la hubiyo in channel la cayimay sida rabitaanka iyo waxaa sidoo kale la fuliyo si loogu isticmaalo mustaqbalka iyo sidoo sameeyo. Waxa kale oo hubin doona in user ka hesho in la ogaado barnaamijka si aad u faahfaahsan.
6. tuuryo keyboard
User waa in sidoo kale baadhaan tuuryo keyboard si loo hubiyo in shaqada la dhameeyo oo waafaqsan shuruudaha ku user iyo isticmaalka software sidoo kale waa ay fududahay in la sameeyo oo la hirgeliyo. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale ogsoonow in ugu fiican iyo barnaamijka ugu horumarsan ee arrintan la xiriira waa in laga fekeraa in samaysay shaqada hab xaq iyo sidoo kale in la hubiyo in user helo asalka u ah arrimaha haddii kasta.
7. fursadaha Rikoodh
User waa in la hubiyo in qaabab duubo waxaa kaloo uu sahamiyey sameeyo iyo sidoo kale la soo xulay in ay kuwa la la doonayo by user si uu u hubiyo in qaabka wax soo saarka fiican ee jira si ay u taageeraan user iyo sidoo kale in la hubiyo in user helo ugu fiican iyo gobolka shaqaynaya barnaamij farshaxanka. Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo kuwa ugu horumarsan mawduucyada in ay tahay in la soo xulay si ay u helaan shaqo lagu sameeyey qaab iyo fasalka.
8. arrimaha Sound
Qaabeynta x264vfw ayaa la bilaabay waa in la hubiyo in arrimaha la xidhiidha dhawaaqa yihiin sahamiyey oo waxaa lagu xalin sida ugu dhaqsaha badan. Waxay kuu ogolaaneysaa in user si aad u hesho sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah hawlaha farshaxanka ee barnaamijka fudayd iyo qanceen.
9. fursadaha Microphone
Waa in la ogaadaa in haddii channel duubay ayaa loo soo xulay in ay makarafoonka user markaas waa inay hubiyaan in fursadaha makarafoonka lagu doorto oo waxaa loo isticmaalaa si loo hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee shaqada farshaxanka waxaa loo isticmaalaa daryeelka ahaysiiyey
10. Full doorasho screen
User ayaa hubiyo in fursad u shaashad buuxda la doorto aad u hesho barnaamijka ka shaqeeya style ka dhigi kara. Waa mid ka mid ah in lagu baari karaa si sahlan haddii sawirka hoos ku qoran waxaa la socda in la qaban shaqo oo aan wax arrintan iyo dhibaatada
Wondershare Video Convertor Ultimate waa ugu fiican oo gobolka ka mid ah qalab tahay shaqeeya hab weyn oo halkan waa barnaamijka kaliya taasina waa u fududahay in la isticmaalo iyo waxtar badan yahay ee. Ka dib markii qaar ka mid ah muuqaalada barnaamijka:
5 muuqaalada Top of Wondershare Video Convertor Ultimate
Ka dib markii yihiin qaababka taas loo hubiyo in Wondershare Video Convertor Ultimate waa kan ugu khayr iyo gobolka convertor tahay video ee jeer oo dhan.
Waxaa la iman taariikhqorihii a video taas oo aan si gooni ah loo rakibo sidii loo gundhig gudahood barnaamijka ugu weyn.
Barnaamijka waa inuu xaqiijiyo in duubo video ah; dajinta, tafatir, geeyo iyo functionalities kale waxaa lagu sameeyaa si fudud oo ku qanacsan.
User wuxuu u baahan yahay si loo hubiyo in ugu wanaagsan oo ah qaababka ugu horumarsan ee HD iyo 4K video dajinta, duubista iyo tafatirka waa sidoo kale waxaa jira si ay u taageeraan user.
Isticmaalka guud iyo interface ee barnaamijka waa user saaxiibtinimo oo loo isticmaali karaa si loo hubiyo in natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu helaa.
5. barnaamijka ayaa sidoo kale la Timaadda version ah maxkamad kaas oo u ogolaanaya user si loo hubiyo in intaadan gadan badeecada si fiican loo tijaabiyey.
> Resource > Video > Top 10 Talooyin aad u baahan tahay ogaato oo ku saabsan taariikhqorihii webcam